तपाईको काँध दुखिरहेको छ, मधुमेह हुनसक्छ ? | latestnepali.com
तपाईको काँध दुखिरहेको छ, मधुमेह हुनसक्छ ?
लगातार काम गरिरहँदा मानिसको काँध दुख्ने गर्छ । चिसोका कारणमा काँधमा दुखाईको महसुस हुन्छ । तर, त्यस्तो दुखाई अलग अलग किसिमको हुन्छ । सामान्य दुखाई भन्दै मानिसहरूले यसलाई बेवास्ता पनि गरेको देखिन्छ । यस्तो दुखाई ४० देखि ६० वर्ष उमेरका मानिसमा ज्यादा हुन्छ । काँधको वरिपरि दुखाई वा अड्केको जस्तो महसुस भएमा बुझिहाल्नुपर्छ कि तपाईलाई मधुमेह भएको संकेत हो भन्ने कुरा ।
जो मानिसलाई मधुमेह भएको हुन्छ उसलाई कमजोरी, ज्यादा भोक लाग्ने र शरीरको कुनै भागमा अड्केको महसुस हुन्छ । यसमा काँधको पीडा सामान्य हो । यदि लगातार काँधको दुखाई बढिरह्यो भने मधुमेहको संकेत हो भन्नु बुझ्नुपर्छ । धेरै दुखाईले मानिसलाई गलाउँछ । उच्च मधुमेहको रोगले हड्डीलाई असर गर्छ ।
फ्रोजन सोल्डरलाई नजरअन्दाज नगर्नुहोस्
काँधमा दुखाई हुनुलाई फ्रोजन सोल्डर पनि भनिन्छ । ४० वर्षमाथिका उमेरका मानिसमा यो समस्या देखिन्छ । यदि त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ भने चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुहोस् ।
काँधमा दुखाईको लक्षण
काँधको दुखाई एकैपटक हुँदैन । यो विस्तारै विस्तारै देखिने गर्छ । यसको तीन चरण हुँछ । यो एकपटक देखापरेपछि केही समयसम्म नदेखिन पनि सक्छ । र, पछि फेरि समस्या देखापरिहाल्छ ।
यसबेला अलि अलि दुखाईको महसुुस हुन्छ । काँध हल्लाउँदा वा लगातार काम गर्दा दुखाई महसुस हुन्छ । केही समयको आरामपछि वा औषधिबाट आराम मिल्छ ।
यो चरणमा दुखाईको मात्रा बढ्छ । काँध हल्लायो पीडा भइहाल्छ । कतिबेला त पाखुरा उठाउँदा वा हल्काफुल्का काम गर्दा पनि दुखाई महसुस हुन्छ ।
यस चरणमा दुखाई शरीरको अन्य भागमा पनि सर्छ । निद्रा कमी, क्याल्सियमको कमी, सुगर, शरीरका जोर्नीहरू दुख्नु, पाखुरा र गर्धनमा समेत दुखाई हुन्छ । राति त झन् बढी समस्या देखिन्छ ।
यस्तो समस्या देखिनेवित्तिकै चिकित्सकलाई देखाइहाल्नु उत्तम हुन्छ । त्यसपछि खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ । सादा खानेकुरा खानुपर्छ । मिठो खानेकुरा बन्द गर्नुपर्छ । स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ । दिनहुँ व्यायाम, योगा गरिरहनुपर्छ । धेरै दुखाई भएमा औषधिका साथसाथै फिजियोथेरापिस्टको मद्दत लिनुपर्छ ।
फेसबुककै एक संस्थापक भन्छन्, ‘जुकरवर्गले सबै खालको मर्यादालाई तिलाञ्जली दिए, फेसबुक टुक्राउन माग’